July 2012 – ProvideCars
Posted on July 19, 2012 by Jon French
How do Japanese cars do onawebsite that judges on the reliability ofavehicle. It should be interesting comparing the list to what used cars are actually exported from Japan.
Starting the list from the number 10 most reliable car down to the number one most reliable car
10. The Mazda2(the Mazda Demio in Japan, quiteapopular export vehicle).
9. The Honda Jazz (the Honda Fit in Japan, againavery common export vehicle).
8. The Volvo S40 (European car)
7. The Suzuki Ignis (Suzuki swift in Japan, againavery common export item).
6. Toyota Corolla (perhaps the number one export vehicle from Japan).
5. Ford Fiesta (well they can’t all be Japanese!)
4. Suzuki Alto (definitely Japanese but notavery common export item)
3. Honda HRV (exported under the same name in Japan)
2. Vauxhall Aquila (sorry, never once seen one of these in the Japanese car auctions)
And now for the grand “Most reliable car” (according toaBritish homepage)
1. Kia Picanto (looksalot like the Honda Fit but definitely born in Korea).
Well Japan didn’t get the number one spot, or the number2but it did get6out of 10 spots in the top 10. Shows there still isamarket for used car exports around the world!
Provide Cars, your door to the Japanese used car auctions.
Posted on July 9, 2012 by Jon French
Provide Cars ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျပန်ကားများ တင်သွင်းရေးကို လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်
မိတ်ဆွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကားတစ်စီးကို ဝယ်ချင်တယ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကားများကို လက်ကားဈေးဖြင့် ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ လက်လီဈေးနှင့် မဝယ်ရစေပါ။ ပြီးတော့၊ မိတ်ဆွေဟာ ကားများနှင့် ကုန်တင်ကားတွေအများကြီးထဲကမှ ရွေးပြီး ဝယ်ချင်တယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဂျပန်လုပ် တပတ်ရစ်ကား လေလံပွဲများမှ၊ ဂျပန် နိုင်ငံထဲရှိ ယာဉ်တွေ အများဆုံးထားရှိရာ အကြီးမားဆုံး ‘‘ကားရုံကြီး’’မှ ရွေးပြီးယူချင်တယ်၊ ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား တင်ပို့ကြသူတို့က ဝယ်ယူကြတဲ့ ကားဂိုဒေါင်ကြီးများမှပဲ မိတ်ဆွေကပါ ဝယ်လိုတယ်၊ မိတ်ဆွေဟာ ဖြစ်နိုင်သမျှ လျှော့ဈေးတွေကို ရချင်တယ်၊ ယာဉ်ကို ပေါက်ဈေးထက် လျှော့ပြီး ဝယ်ချင်တယ်၊ ရမယ့်အမြတ်ကို တင်ပို့သူတွေမဟုတ်ဘဲ၊ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် ရယူချင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့လို့သာ မိတ်ဆွေဟာ ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား လေလံပွဲများမှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ပြန်ရောင်းသူဖြစ်တယ်၊ ယာဉ်များကို တစ်ခုမက ဝယ်ယူလျက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တဆင့်ပြန်ရောင်းသူဖြစ်တယ် ဆိုရင်၊ မိတ်ဆွေဟာ ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား လေလံတင်ပွဲများမှ ကားဝယ်ယူရေးကိစ္စကို သိရှိရန် လိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဂျပန် တပတ်ရစ်ကား လေလံပွဲများမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရေး၊ ပျမ်းမျှလေလံတင်ဈေးများ၊ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရေးစနစ် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံထဲက ရောင်းကြတဲ့ နေရာတွေ စသဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်လုံးကို နားလည်ရန် လိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဝယ်ယူခြင်းမှ အစ ရန်ကုန်ကို အရောက် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်လုံးကို သိနားလည်ရန် လိုပါတယ်။ သင်္ဘောဖြင့် ပို့ရာတွင် ကားကိုယ်တိုင် မောင်းဝင် မောင်းထွက် ပုံစံနှင့် ပို့ခြင်းက ကွန်တင်နားနှင့်ပို့ခြင်းထက် ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရှိတယ်၊ ကုန်ကျမှု ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာကိုပါ မိတ်ဆွေဟာ သိနားလည်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ သင်ဝယ်ထားတာတွေကို အာမခံမလုပ်ဘဲ ပို့မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်များပုံ၊ တနည်း မိတ်ဆွေက သင်္ဘောနှင့်ပို့တာတွေကို အာမခံပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပုံကို မိတ်ဆွေ နားလည်ရန် လိုပါတယ်။
“အသိပညာခေါင်းပါးရင် လူမျိုးတုံးရတတ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံဟောင်း တစ်ခုရှိလေရာ၊ သွင်းကုန် လုပ်ကိုင်နေသူ မိတ်ဆွေနှင့်ပါ သက်ဆိုင်တဲ့ စကားပုံပါပဲ။ မိတ်ဆွေဟာ တပတ်ရစ်ကားတွေ တင်ပို့ရေး နှင့် တင်သွင်းရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဆွေရဲ့ အသိပညာများကို အခိုင်အမာ ထူထောင်သွားခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲမှာ ထိပ်တန်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Provide Cars မှာ မိတ်ဆွေကို လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးကို ပြပေးမယ်၊ မိတ်ဆွေကို လေ့ကျင့်ပေးမယ်၊ လေလံတင် စာတမ်းများကို ဘာသာပြန်ပေးမယ်၊ ပြည်တွင်းထဲမှာ ပေးရနိုင်တဲ့ စိရတ်စကတွေကို အကြောင်းကြားပေးမယ်၊ မိတ်ဆွေရဲ့ ပြိုင်ဖက်များနှင့်စာရင် သက်သာတဲ့ ဈေးဖြင့် ကားတွေကို တင်သွင်းနိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို သင်ပေးကြပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်များက ကျွန်တော်တို့အကြောင်း ဘယ်လို ထင်မြင်ကြတာကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted on July 5, 2012 by Jon French
Cars in the top 10 Japanese Exports for 2010
In the top 10 exported products from Japan to US in 2010, cars or car parts were involved in four of them.
Number 1: Passenger automobiles withavalue of $13.7 billion
Number 4: Medium sized station wagons and vans withavalue of $805 million
Number 5: Motor vehicle parts withavalue of $746 million
Number 8: Vehicle gear boxes withavalue of $477 million
While on the other hand, in the top 10 exported products from US to Japan, vehicle or vehicle related products are not mentioned. Food hasalot higher priority
Number 2: yellow corn withavalue of $1.2 billion
Number 3: soybeans withavalue of $583 million
Number 5: fresh or chilled pork withavalue of $359 million
Number 7: frozen pork withavalue of $329 million
Number 9: wheat withavalue of $326 million
So Japan sells cars for food in its relationship with the US.
Provide Cars, the online used car auction shop